အစကနဦးအစကနဦးအကြောင်းကို သင် စဉ်းစားဖူးပါသလား? သင် ဘယ်လိုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ? ပထမဦးဆုံး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာဘာမဆို။ ဒါမှမဟုတ် အချိန်အစောဆုံးကာလမှာ ဒီနေရာမှာ အရင်ဆုံးရှိခဲ့တဲ့အရာဘာမဆိုပေါ့။ သင့်ဦးနှောက်ကို ညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ ဒီအကြောင်းအရာကို စဉ်းစားဖူးပါသလား?
ခဏလေး၊ အစကနဦးတုန်းက ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ သင်ပြောပါသလား? လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းအသချေင်္အနန္တကြာတုန်းက လုံးဝ ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား? အဲဒါ စဉ်းစားရမယ့် သီအိုရီတစ်ခုပါပဲ။ ဆိုတော့ အဲဒါကိုစဉ်းစားရအောင် -- နှိုင်းယှဉ်ချက်တွေနဲ့ အရင်စဉ်းစားရအောင်။
ဟုတ်ပြီ၊ သင်လုပ်ရမှာက အခန်းထဲမှာ တစ်ခုခုရှိလာဖို့ -- ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် စည်းကမ်းချက်တွေက- အဲဒါလုပ်ဖို့ အခန်းအပြင်ကပစ္စည်း ဘာတစ်ခုမှ ယူမသုံးရဘူး။ ကဲ သင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ဒုတိယပြဿနာကတော့ဒီဟာပါ- အဲဒီအခန်းလွတ်ထဲမှာ ဘာကြောင့် တစ်ခုခု “ပေါ်လာ” ရမှာလဲ? ပေါ်လာဖို့ရာ အကြောင်းရင်းတစ်ခုခု ့ရှိမှရမှာပေါ့။ အခန်းထဲမှာမှ ဘာမှမရှိတာကို။ အဲဒါဆို ဒီအတိုင်းကြီးဖြစ်နေမယ့်အစား ဘာလုပ်ရမလဲ? တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်ဖို့ရာ အခန်းထဲမှာ ဘာတစ်ခုခုမှ ရှိလာမှာမှမဟုတ်တာ။ (ဒါပေမယ့် အခန်းထဲကနေပဲ စရမှာလေ။)
ဒါဆို မေးခွန်းကတော့- အစကနဦး -- လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အသချေင်္ -- က ဗလာနတ္ထိ်ကြီး ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် အခုရော ဗလာနတ္ထိကြီးပဲ ရှိမနေရဘူးလား?
ဟုတ်ကဲ့။ တစ်ခုခုဟာ -- ဘယ်လောက်ပဲသေးငယ်ပါစေ -- ဗလာနတ္ထိထဲကနေ ဖြစ်မလာနိုင်တဲ့အတွက်ပါပဲ၊ ကျနော်တို့ အခုထိ ဗလာနတ္ထိပဲ ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။